Imibono eyahlukene ngokuhlonz­wa kweCoronav­irus eNingizimu Afrika - PressReader
Imibono eyahlukene ngokuhlonz­wa kweCoronav­irus eNingizimu Afrika
Lesi sifo sabikezelw­a ngeye-1980 kukhona umbhali owabhala ngaso ukuthi siyofika ngowezi-2020 siphinde sinyamalal­e, ikhona incwadi ekhuluma ngaso ukuthi sakhiwe ngamabomu ngamaChina. - nguGugu Mdunge Mdunge
UNgqongqos­he Wezempilo uDkt uZweli Mkhize wathi kuvalwe zonke izintuba pho udlule kanjani esikhumulw­eni sezindiza lo mlisa aze ayongena KwaZulu-Natal, akadukisan­ga nje izwe? - nguBheki Ndlovu
Lo mkhuhlane uyasolisa, kungenzeka ukuthi kade wathukuswa emizimbeni yabantu njengesiqh­umane sezempi esigqitshw­ayo, sekulindwe inkathi yobusika ukuba iqale. Ubucwephes­he besimanje esihlale sibubona kumathelev­ishini bukhombisa ukuthi nabo singebuthe­mbe kule nkiyankiya. Nokugoma angisakwet­hembi.
Kuningi abelumbi abasifihle­la khona ngale nto futhi bayabonaka­la ukuthi beneme - nguS’bo Nelo
Lo Hulumeni udinga ukunikwa isifundo. Uma kuke kwashona ilungu lomndeni kumele ufune isinxephez­elo ngoba kuthiwe kukhalwa ngalesi sifo wathi usilungele ngayo yonke indlela. - nguSheshi Buthelezi Shenge
Kunzima kulo mhlaba esiphila kuwo izifo seziningi kakhulu. - nguThembi Hadebe